Sabotsy 09 Martsa 2019. – FJKM
Sabotsy 09 Martsa 2019.
Fandalinana ny 1 Mpanjaka
1 Mpanjaka 10.1-13
Nampahatsiahivin’i Jesoa manokana ity tantara ity ao amin’ny Matio 12.42 ka ampianariny antsika fa:
1-Lehibe lavitra noho i Solomona i Jesoa . I Solomona dia nahatalanjona ka nahasintona ny mpanjakavavin’i Sheba ho tonga manatona azy . Ary isika , mba talanjona sy voasintona hanatona an’i Jesoa ve? Fa ambony lavitra noho i Solomona i Jesoa satria ny vokatry ny fanatonantsika Azy dia tsy ahazoam-pahalalana sy ahitam-pahagagana fotsiny , fa andraisam-pamonjena mandrakizay mihitsy .
2-Tokony ho mendrika ilay mpanjaka ny mpanompony. Ny toetoetran’ireo tandapan’i Solomona sy ny fitafiany , dia samy nahagaga ilay mpanjakavavy avokoa Ary isika , izay mpanompon’i Jesoa Ilay mpanjakan’ny mpanjaka , mba mendrika sy hitan’ny olona ho mendri-kaja mifanentana amin’ny voninahitr’i Jesoa ve?
3-Sambatra isika izay manana ny tenin’i Jesoa . Hoy ny and 8 : « sambatra lahy ny olonao , ary sambatra ireto tandapanao ireto , izay mijanona eto anatrehanao mandrakariva ka mandre ny fahendrenao « . Ny tenin’i Jesoa dia mahasambatra lavitra , araka ny teniny tamin’ilay vehivavy niara-belona taminy hoe: « mainka sambatra aza ny mihaino ny Tenin’ Andriamanitra ka mitandrina izany » (Lio 11.28). Mba mivelona amin’izany mandrakariva ve ianao ?